Dzazvino nhau |
Iko Ikozvino Kuvandudzwa kweMidziyo Mould Indasitiri
With kuramba kukura China Furniture Mould indasitiri, kudiwa uye kudiwa fenicha muforoma zvigadzirwa vari kuwedzera zvishoma nezvishoma. Uye kukura uku kwakaunza kukurudzira kukuru mukusimudzira tekinoroji tekinoroji. Mune ramangwana kuvandudzwa kwemaindasitiri, tekinoroji yevaeni ...
Maitiro Ekugadzira Mhepo Inotonhorera Mould Yemhando yepamusoro
1. Iyo dhizaini uye yekugadzira mutengo weiyo yega Mhepo Inotonhorera Mould inofanira kupfupikiswa munguva: kuburikidza neanoshanda kutonga kweiyo musangano, kunyatso kudzora kubviswa kweiri basa basa, kuburikidza neiyo chaiyo chakuumbwa chimiro dhizaini, inoshanda mold chikamu chikamu kugadzirisa uye chaiyo zero zvikamu kuongorora, ...
Yakanyanya Kudzikira Tembiricha muiyo Iyo Dustbin Mould Inogona Kukonzera Kumusoro Kukanganisa
Kunyangwe kana iyo nyungudika yapinda muDustbin Mould, jekiseni kumhanya kunogara kuripo uye kuyerera kwayo mwero kunochinja. Iyo yekunyungudika kuyerera mwero yakakwira kana uchipinda mugereji bhokisi gedhi nzvimbo, asi iyo yekunyungudika kuyerera chiyero inotanga kudzikira mushure mekupinda muforoma mhango, kureva, iyo dustbin chakuvhuvhu yekuzadza nhanho. Misiyano mu t ...
Maitiro Ekubata Nazvo Zvakakodzera Iyo Texture yeiyo Sachigaro Mould Pamusoro
ne admin pane 21-03-28
Nzvimbo dzakasviba dzinoonekwa kwete chete panguva yekuvhurwa kweChigaro Mould, asi zvakare kazhinji mushure mekuumbwa kwemakona akapinza echinyorwa. Semuenzaniso, iyo yakapinza kona yekona yechinhu kazhinji inotsvedzerera, asi yakanyanya kuchena uye yakaomarara kuseri kwayo. Izvi zvakare zvakakonzerwa nekuwedzeredza kuyerera uye jekiseni spe ...
Dhizaini yeMhepo Inotonhorera Mould Inotarisa Iyo Tsika yeWarping
Chaizvoizvo, dhizaini yeMhepo Inotonhorera Mold inosarudza maitiro ekuruka. Izvo zvakaoma kudzvinyirira iyi tsika nekushandura mamiriro ekuumba. Chekupedzisira, dambudziko rinofanira kugadziriswa kubva pakuumbwa uye nekuvandudzwa kwemhepo inotonhorera muforoma. Ichi chinoshamisa chinonyanya kukonzerwa nekutevera ...
Kuburikidza Kuenderera Kwayedza Kutonga Hunhu hweiyo Dustbin Mould
Kune iyo Dustbin Mould, iwo akakosha mapoinzi asymmetry (hupenyu hweforoma uye yakareba-refu bhaketi mhando) nekuisa chisimbiso mashandiro (bubble mhando), saka yakakwirira yekugadzirisa michina kunyatso inodiwa. Imwe yematanho akakosha kudzora kwemhando yepamusoro, izvo zvingave zvakanaka kana mupi anga aine yakakwana mhando ...
Gadzira Iyo Yakakwana Kugadzira Maitiro eDhivhosi Zvinodiwa Mould
Maitiro ekugadzira yakakwana yekugadzira maitiro echikamu cheakabudirira Mazuva ese Zvinodiwa Mould zvinoenderana kusvika pakukosha pane chaiyo yezuva nezuva zvinodiwa zvinoshandiswa. Iyo hwaro hwezvinhu zvisingaverengeke. Iyo chaiyo yezvikamu muzvinhu zvezuva nezuva zvinodiwa zveforoma zvikamu zvinogadziriswa, ...
VAKadzoka KUBASA 2021
KUDZOKA KUSHANDA 2021 Chinese Chitubu chakapera uye tadzoka kuzoshanda! Bhizinesi rekutanga raHeya rinotarisa mukugadzira mapurasitiki epurasitiki ane anopfuura makore gumi ezviitiko. Zvakadai seumba anoumba, kitchenware jekiseni anoumba, musha mudziyo muforoma maturusi, maindasitiri uye zvokurima inj ...